कला प्रदर्शन गरेर मनोरंजन देउ तर यसरी गोप्य राख्ने अंग देखाएर युवा न तताउ (भिडियो) « Online Tv Nepal
कला प्रदर्शन गरेर मनोरंजन देउ तर यसरी गोप्य राख्ने अंग देखाएर युवा न तताउ (भिडियो)
Published : 1 June, 2018 11:55 pm
हाम्रो समाज पनि परिवर्तनको बाटोमा तीब्र गतिले दगुरिरहेको छ । कैयौं सकारात्मक परिवर्तनसँगसँगै केही नकारात्मक परिवर्तन पनि देखिएका छन् । जसको नियन्त्रणमा आजैदेखि लाग्नु सबै जिम्मेवार नागरिकको कर्त्तव‍य हो । केही नकारात्मक कुराहरूमध्ये यहाँ नारी स्वतन्त्रताको अभियानमा देखापरेका विकृतिहरूमाथि टिप्पणी गरिनेछ ।
खासगरी भारतवर्षमा मनुस्मृतिको रचनासँगै नारीमाथि हुँदै आएको अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन बिभिन्न रूपमा आज पनि जारी छ । हाम्रो संविधानमा लैंगिक समानताका शब्दहरू लेखिए पनि जीवन-व्यवहारमा डरलाग्दा असमानताहरू कायमै छन् । जसको अन्त्यका निम्ति कठोर लडाईं अझै धेरै लड्न जरूरी छ । नारी असमानताको लडाईं नारीले मात्र लड्ने हो भन्ने भ्रम पनि हाम्रो समाजमा कायमै देखिन्छ । वास्तवमा पुरूषको सहयोगविना नारी समानताको लडाईं अधुरो र अपूर्ण रहन्छ । तसर्थ, यस लडाईंमा पुरूष सहयोगको खाँचो छ ।
नारी स्वतन्त्रताविना किमार्थ, घर-परिवार, समाज र देशमा सुख, शान्ति, खुसी र समृद्धि सम्भव छैन । तर, स्वतन्त्रता भनेको के हो ? सबभन्दा पहिला यो बुझ्न जरूरी छ । मेरो बिचारमा स्वतन्त्रता भनेको अधिकार र कर्तब्यको सुन्दर संयोजन हो । अधिकारबिनाको कर्तब्य निरंकुश र कर्तब्यबिनाको अधिकार अराजक हुन्छ । पछिल्लो समयमा हाम्रो समाजमा अराजकता बढ्दो छ ।
हाम्रो संस्कृति, कला, साहित्यको बेइज्जत गर्नमा नारीहरूको शारीरिक सुन्दरता प्रयोग भइरहेको छ । कतिपय नारीहरू पनि त्यसैलाई नारी स्वतन्त्रता बुझेर गौरव गरिरहेका छन् । स्वतन्त्रता भनेको सर्बांग अंग प्रदर्शन हो? पक्कै होइन । यो एक प्रकारको उपभोक्तावाद हो । के नारी उपभोगको साधन हो ? नारीलाई नंग्याएर वा नारी आफु स्वयं नांगिएर नारीको सम्मान बढ्छ ? नारी स्वतन्त्रता सुनिश्चित हुन्छ ? किन हामी यस्तो विनाशका बाटो हिंडिरहेका छौं ? समाज र देशका शासकहरू के हेरिरहेका छन् ? समाज र देशको बेइज्जत हुँदा शासकहरूलाई लाज लाग्नुपर्दैन ?
अंग प्रदर्शनको कारण ज्योति मगर र रिया श्रेष्ठ अहिले चर्चाको चुलीमा हुनुहुन्छ । ब्यक्तिगत रूपमा म उहाँहरूलाई इज्जत गर्छु । उहाँहरूको कलाको सम्मान गर्छु । तर, ब्यक्तिगत स्वतन्त्रताको नाममा देशका विभिन्न भागहरूमा ज्योतिजी र विदेशमा रियाजीले नेपाली संस्कृति र कला प्रदर्शन गर्ने बाहानामा जसरी आफूलाई नंग्याइरहनुभएको छ, त्यसले म जस्ता नेपाली नारीहरूको लज्जाले शीर नुहेको छ ।
यस पुरूषप्रधान समाजमा स्टेजमा तपाईंहरूको नग्न शरीर र कामुक हाउभाउ देख्दा जुन ताली र प्रसंशाको बर्षा हुन्छ, स्टेजबाट झरेपछि त्यसको सयगुणा बढी निन्दा र भत्सर्ना हुन्छ । बाहिर छोटो कपडामा नारी सुन्दरता देख्ने पुरूषहरू घरमा सकेसम्म बुर्काभित्र देख्न चाहन्छन् नारीलाई । पुरूषको यस्ता संकीर्ण सत्ता विरूद्ध संघर्ष गर्नैपर्छ । तर, सीमा नाघेर होइन ।
तपाईंहरूले आफूलाई बोल्ड र आधुनिक नारी पनि भन्न सक्नुहोला । तर, अन्ततः तपाईंहरूको क्रियाकलापले नारीलाई केवल भोग्या र पुरूषको मनोरञ्जनको साधन नै बनाउने छ । के यो हामी नेपाली नारीहरूका लागि सुखद कुरा हो ? कृपया एकचोटि निधार खुम्च्याएर सोंच्ने कि ?
अन्तमा, मेरो विनम्र अनुरोध छ- सर्वाङ्ग नांगिन पाउनु नारी स्वतन्त्रता होइन । नाङ्गो शरीरमा कुनै सौन्दर्य रहँदैन । तसर्थ, सामाजिक मर्यादा र सीमाभित्र रही व्य क्तिगत स्वतन्त्रता उपभोग गर्ने कि ?